Basanta Basnet: केही खस्रा कुराहरु.. (कुरा खस्रा मिठा- 2)
काठमाडौं पो मोफसल!
रिडर्स झापाले सुदूर पूर्वको काँकरभिट्टा शहरमा आइतबारदेखि 'कला साहित्य उत्सव' आयोजना गर्दैछ। तीन दिने यो साहित्य मेलामा नेपाल र भारतका थुप्रै लेखक, साहित्यानुरागी र बुद्धिजीवी सहभागी हुँदैछन्। राजधानीदेखि धेरै टाढा यति ठूलो खर्च र तामझामका साथ साहित्य उत्सव हुन लागेको यो पहिलो घटना हो। त्यसैले झापाली तामझामको चर्चालेे राजधानी गर्मिनु स्वभाविकै हो।
शनिबार यस्तै भयो। कवि भूपिनको पहिलो निबन्धकृति 'चौबिस रिल' विमोचन समारोहमा भेटिएका लेखकहरू झापाली उत्सवकै चर्चा गरिरहेथे। लाग्थ्यो, नेपाली साहित्यमा अहिले दुईथरी लेखक छन्। एक, झापा जाने। दुई, झापा नजाने।
बिरलाकोटी गद्यका खेलाडी कुमार नगरकोटीले भने एकलाइन प्रतिक्रिया दिए। उनलाई सोधिएको थियो, 'तपाईं पनि झापा जाँदै हुनुहुन्छ?'
उनले फर्काए, 'बोलाएको भए न जान पाउनु, अब त काठमाडौं पो मोफसल भइसक्यो।'
पंक्तिकारले सुरुमा त एकछिन गम खायो। तै पनि नगरकोटीले भनेको! पक्कै ठूलै कुरो होला भनेर चित्त बुझायो।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गान्धी भवनअघिल्तिर उभिएर भाषण गरे। पञ्चायतकालका दिनहरू स्मरण गर्दै उनले राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डललाई 'मण्डले' भनी होच्याए। नयाँ नेपाल बनाउन हिँडेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सम्बोधन गरेको उति कर्णप्रिय सुनिएन। प्रधानमन्त्री भनेका प्रधानमन्त्री हुन्। उनी सबैका हुन्, प्रतिपक्षी विचार राख्ने जनताका पनि।
फरक विचार बोकेकै आधारमा कसैलाई मण्डले, प्रतिक्रियावादी भनेर सरकारले नै सम्बोधन गरिदिने हो भने हिजो रक्तपातपूर्ण संघर्षमा हिँडेको माओवादीलाई कसैले आतंककारी भन्दियो भने के गर्ने नि? अनि हिजोको वाइसिएलले त्यो बेलाको 'मण्डले' बिर्साउने गरी गरेको गतिविधिलाई कसैले छलफलको विषय बनाउन चाह्यो भने माओवादी मित्रहरूले सहजै पचाउलान्?
हाम्रो लोकतन्त्रले संस्कार पाउन बाँकी छ। त्यो कुरो हाम्रा नेताहरूको भाषामा पनि झल्किन्छ। कसो प्रधानमन्त्रीज्यू!
नागरिकमा २०६९ फागुन २६ गते शनिबार प्रकाशित
Posted by Basanta Basnet at 3:11 AM